RFID အသေးစား COB Tag ကို, RFID Toy အီလက်ထရောနစ်ကုန်ပစ္စည်းစီမံခန့်ခွဲမှု COB Tag ကို, RFID Micro နဲ့ COB Tag ကို, RFID Toy စီမံခန့်ခွဲမှု Micro နဲ့ COB Tag ကို, RFID အီလက်ထရောနစ်ကုန်ပစ္စည်းစီမံခန့်ခွဲမှု Micro နဲ့ COB Tag ကို
RFID အသေးစား COB Tag ကို, RFID အီလက်ထရောနစ်ကုန်ပစ္စည်းစီမံခန့်ခွဲမှု COB Tag ကို
အခြားအ Dedicated Tag ကို RFID အီလက်ထရောနစ်ကုန်ပစ္စည်းစီမံခန့်ခွဲမှု Micro နဲ့ COB Tag ကို, RFID Micro နဲ့ COB Tag ကို, RFID အသေးစား COB Tag ကို, RFID Toy အီလက်ထရောနစ်ကုန်ပစ္စည်းစီမံခန့်ခွဲမှု COB Tag ကို, RFID Toy စီမံခန့်ခွဲမှု Micro နဲ့ COB Tag ကို
micro RFID COB Tag ကို, ကစားစရာများအတွက်သင့်လျော်သော, သေးငယ်တဲ့အီလက်ထရွန်းနစ်ထုတ်ကုန်စာရင်းစီမံခန့်ခွဲရေးနှင့် traceability ခြေရာခံခြင်းစီမံခန့်ခွဲမှု.
ထုပ်ပိုးပစ္စည်းများ: COB encapsulation တွေကိုသေချာ (လူမီနီယံဝါယာကြိုး)
protocol စံ: ISO ကို 15693, ISO ကို 14443A / B သို့မဟုတ် ISO ကို 18000-6 B က A / C
frequency: 13.56 MHz, 860~ 960MHz
chip: NXP Mifare M1, TI, Ultralight, FM11RF08, စသည်တို့ကို
ကုန်ပစ္စည်းအရွယ်အစား: 66mm ×မီလီမီတာ (Size ကိုစိတ်ကြိုက်ပြုပြင်နိုင်ပါတယ်)
ကုန်ပစ္စည်းအထူ: 0.7~ 1.5mm
antenna ပစ္စည်း: ကြေးနီထွင်းအင်တင်နာအခြေစိုက်စခန်းဘုတ်အဖွဲ့ (PCB)
Reading အကွာအဝေး: 0~ 100mm (မူတည်. စာဖတ်သူကို, RFID ချစ်ပ်, protocol ကိုစံ, ပတ်ဝန်းကျင်)
ဇာတ်ကောင်ပုံနှိပ်ခြင်း: ခြစ်ရာမပေါ်သို့မဟုတ်ပုံနှိပ် (ဇာတ်ကောင်)
အလုပ်လုပ်အပူချိန်: -25℃ ~ + 80 ℃ (-13℉ ~ + 176 ℉)
သိုလှောင်ခြင်းအပူချိန်: 0℃ ~ + 25 ℃ (32℉ ~ + 77 ℉)
ဒေတာကိုတရားဝင်မှု: R / W ကို 100000 ကြိမ်
အဖုံး: အမြောက်အများသို့မဟုတ်နို့စို့ disc ကိုထုပ်ပိုး,စသည်တို့ကို
micro COB Tag ကိုပု SeabreezeRFID ကုမ္ပဏီကတီထွင်ထုတ်လုပ်အီလက်ထရောနစ် tag ကိုနဲ့ module တစ်ခုအသစ်အမျိုးအစားဖြစ်ပါသည်. ဒါဟာအထူးဒီဇိုင်းအင်တင်နာနှင့်အပြောင်းအလဲနဲ့နည်းပညာချမှတ်, COB encapsulated, နိမ့်ဆုံးထုတ်ကုန်အရွယ်အစား 6mm × 6mm နိုင်ပါသည်. တန်ဖိုးနည်း, ချေးခုခံ, အက်ဆစ်နှင့်အယ်လကာလီခုခံ, အဝတ်လျှော်ခုခံ, အပူချိန်မြင့်, အနိမ့်အပူချိန်, ဖိအားခုခံ, အထူးအီလက်ထရောနစ် tags များအသုံးပြုမှုထပ်ခါတလဲလဲနိုင်ပါသည်. အနီးကပ်အကွာအဝေးကိုဖတ်နိုင်သလား.
ပင်မလျှောက်လွှာဒေသများ: စမတ်ကစားစရာ, လက်မှုပညာ, ဆက်သွယ်ရေးပစ္စည်းကိရိယာများ, အီလက်ထရောနစ်ထုတ်ကုန်, သေးငယ်တဲ့ကုန်စည်တွေ, အဖိုးတန်, ထိုကဲ့သို့သော RFID traceability ခြေရာခံခြင်းနှင့်အချက်အလက်စီမံခန့်ခွဲမှုအဖြစ်.
ငါသည်သင်တို့၏ထုတ်ကုန် RFID အသေးစား COB Tag ကိုစိတ်ဝင်စားမိပါတယ်, RFID အီလက်ထရောနစ်ကုန်ပစ္စည်းစီမံခန့်ခွဲမှု COB Tag ကို
prev: RFID လက်သည်း Tag ကို, RFID Tree Tag ကို, RFID စက်ရုံ Tag ကို, RFID Rivet Tag ကို
နောက်တစ်ခု: RFID အသေးစားပလတ်စတစ်-coating Tag ကို, တူရိယာပစ္စည်းအီလက်ထရောနစ်ကုန်ပစ္စည်းစီမံခန့်ခွဲမှု RFID Micro နဲ့ Tag ကို